Ngilifaka kanjani esikhundleni ithebhu ngombhalo ku-Notepad ++? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > I-Notepad buyisela ithebhu - ukuthola izixazululo
I-Notepad buyisela ithebhu - ukuthola izixazululo
Ngilifaka kanjani esikhundleni ithebhu ngombhalo ku-Notepad ++?
Okokuqala qiniseka ukuthi unayo 'Faka okunye esikhundleningesikhala 'esingamakiwe'IthebhuIzilungiselelo '. ...
Okwesibili, ungahle uthande ukunika amandla i-'Show White Space neITHEBULA'. ...
Imenyu 'Sesha'> 'Faka okunye esikhundleni'(noma Ctrl + H)
Setha okuthi 'Thola ukuthi yini' ''
Setha 'Faka okunye esikhundleninge 'to \_ t.
Nika amandla 'isisho esijwayelekile'
Chofoza 'Faka okunye esikhundleniKonke '
Ukufaka okunye noma ukufaka isikhala sethebhu ku-Notepad ++ Isinyathelo 1: Vula ifayela ku-Notepad ++ ofuna ukuyihlela noma wenze izinguquko Isinyathelo 2: Hambisa isikhombisi sakho noma ukhethe umugqa wekhodi noma wendima noma wombhalo lapho ufuna ukwengeza khona isikhala sethebhu ( t) sikhetha 'futhi sisho' bese sengeza isikhala sethebhu ngaphambi kokuba kuqokonyiswe lo musho Isinyathelo 3: Manje khetha umusho bese ucindezela u-Ctrl + h Uzothola i-pop-up 'Buyisela' Futhi uzobona ibinzana eligqanyisiwe livela ebhokisini elithi 'Thola Yini'. Isinyathelo 4: Manje kopisha bese unamathisela umushwana ofanayo ebhokisini elithi 'Buyisela Nge' elingezansi Qaphela: Ngaphambi kwebinzana nombuso, engeza into engu - ' t' bese uqinisekisa ukuthi Ngezansi inketho Ethuthukile ku-popup - 'Buyisela' iwindi kukhethiwe. Isinyathelo 5: Manje chofoza Faka esikhundleni noma Faka Konke inkinobho uma ufuna ukufaka yonke imishwana ekulo mbhalo ngokuchofoza okukodwa.
khipha isiteshi sezulu
Isinyathelo 6: Njengoba ubonile lapho ngichofoza Faka esikhundleni esinye ibinzana ngesikhathi ngenhla, uma ufuna ukuwabeka onke, chofoza u-'Beka Konke 'kodwa qaphela: kwesinye isikhathi kufanele uchofoze Faka Konke kuzama kokuqala, ngaphandle kwalokho kuthanda Uma ufuna ukwengeza isikhala sethebhu esithe xaxa, mane ufake izinto eziningana zethebhu ezinjenge - ' t t t ' t t …… 'Isinyathelo 7: Uma manje ufuna ukufaka ibinzana ngezinhlamvu zethebhu, khetha umbhalo bese ufaka t esikhundleni salokho. Njengoba ubonile, umaki ubuyiselwe esikhundleni se- t t - 2 times space space Ungasebenzisa ezinye izinto ezifana ne- n-> kulayini omusha; 0-> esikhaleni esingenalutho Sebenzisa nje izinyathelo ezifanayo ngokufaka okuhambisanayoSicela BHALISELE bese wabelana ngama-athikili amaningi ...
Ngilifaka kanjani esikhundleni ithebhu ngezikhala?
Letha ukuthola /buyisela.
Namathisela kunkambu yokuthola.
Chofoza kufayela le-buyiselafield bese ushaya i-isikhalaibha.
19 jana. 2009
Ngabhala incwadi enezigaba eziningana, futhi ukwenza isigaba ngasinye sigqame kancane, ngifuna ukufaka indenti kulayini wokuqala. Ngaphambi kokungeza i-indent, kufanele uye kuthebhu ethi Buka bese uqinisekisa ukuthi irula liyakhombisa njengoba kwenza kube lula ukulungisa ama-indents akho. Ukwenza i-indent kulayini wokuqala, ungamane ubeke iphoyinti lokufaka ekuqaleni kwendima bese ushaya ukhiye wethebhu, uhambise umaki omncane kurula phambili 1/2 intshi.
Lona umaki wokuhlehlisa ulayini wokuqala. Kukhona nomaka we-indent ulenga, umaka we-indent kwesokunxele ngqo ngezansi, nomaka wokuhlehlisa ongakwesokudla. Singazigudluza zenze izinhlobo ezahlukahlukene ze-indent.
Azithinti yonke idokhumenti, kuphela izingxenye ezikhethiwe. Ngakho-ke ake sikhethe zonke lezi zigaba. Manje donsela umaki we-induction womugqa wokuqala.
Ukudiliza ngeke kugijime
Futhi singakha i-indent yokulenga eshintsha yonke imigqa ngaphandle kolayini wokuqala. I-indent yesobunxele ihambisa yonke imigqa ngasikhathi sinye, futhi i-indent elungile iyasiza lapho ufuna ukunciphisa isigaba. Kepha ngale ncwadi ngidinga ukubukeka kwendabuko ngokwengeziwe ngakho-ke ngizobe ngenza i-indent yolayini wokuqala we-1/4 intshi.
Ama-indenti ayindlela enhle yokugcina izinto ziklelisiwe kudokhumenti yakho, kepha ukuthola amadokhumenti ayinkimbinkimbi njengokuqalisa kabusha, awanele ngaso sonke isikhathi. Ngifuna yonke leyo datha ibe kulayini owodwa. Ngingavele ngisebenzise izikhala, kepha kuba nzima noma kungenzeki ukuqondanisa kahle.
Ngakho-ke kufanele ngisebenzise amathebhu. Uma ngabe ngibeka iphoyinti lokufaka ngaphambi kombhalo engifuna ukuwuqondanisa bese ngishaya ukhiye wethebhu, izogxumela phambili ngokungezelelwa kwesigamu-intshi. Kulula kakhulu ukuqondanisa le datha ngaleyo ndlela.
Uma uya kuthebhu yasekhaya bese uchofoza umyalo we-Show / Fihla, kuzobonakala amathebhu futhi azovela njengemicibisholo emincane. Ungazisusa ngokushaya ukhiye we-backspace. Lokho kusebenza kahle, kepha ngithanda ukulawula okuthe xaxa ekutheni imigqa yombhalo ibukeka kanjani ncamashi.
Ngicabanga ukuthi ithebhu yinto nje. Sidinga lapha. Ukuma kwethebhu kutshela umbhalo ngqo ukuthi ungaqondanisa kanjani ukuze ungakhawulelwe ekukhushulweni kwesigamu se-intshi.
Ngakwesobunxele kwesikrini isikhethi seThab. Ukuchofoza kuyo kuzohamba kuwo wonke amathebhu ezinhlobo ezahlukahlukene anquma ukuthi ngabe umbhalo ulungile, ugxile, ulungile kwesokudla, noma endaweni yedesimali lapho usebenzisa izinombolo. Ngizokhetha ithebhu elungile.
Njengama-indents, amathebhu kuphela asebenza esigabeni esikhethiwe, ngakho-ke khetha konke okudinga amathebhu, bese uqhafaza phansi kwerula lapho ufuna khona ukuthi ithebhu ibe khona - ungangeza ngaphezu kweyodwa uma ufuna, futhi ungabasusa ngo umane ubadonsele kude nombusi. Ukuvumelanisa izinsuku, sifuna nje ukwengeza ukumiswa kwethebhu ngaphambi konyaka ngamunye, futhi bazogxumela esitobhini esisha sethebhu. Ngokuvamile, udinga ukwengeza ithebhu yokuma kwethebhu ngayinye; ungahambisa nokuma kwamathebhu okukhona.
windowsapps ifolda yokuhlanzwa
Qiniseka ukuthi umbhalo wakho ukhethiwe, bese uhambisa ithebhu kwesokunxele noma kwesokudla phansi ukuze ushiye indawo eningi yombhalo. Uma ngilayida ithebhu kude kakhulu ngakwesobunxele, idatha ngeke ibe nendawo eyanele futhi ngeke ihambisane kahle. Lo mbhalo ubukeka ungcono kakhulu manje futhi ngicabanga ukuthi wonke uhlelelwe ukuwunika ukubukeka okuhle, nokusezingeni eliphezulu.
Ngisithola kanjani isimilo sethebhu ku-notepad?
Ku 'thola'ukuzeIthebhu, gqamisa i-Ithebhu, ikopishe (ctrl + C), bese uyinamathisela ku- 'thola'ibhokisi: ctrl + v.
Ungawashintsha kanjani wonke amathebhu ku-Notepad ngezikhala?
1 Vula ifayela ku-Notepad ++ 2 Cindezela u-Ctrl + F ukuvula i-Find Box. Khetha Faka esikhundleni ithebhu. ... 3 Chofoza Faka okunye esikhundleni. Onke amathebhu azothathelwa indawo izikhala / amakhoma.
Ingabe ikhona indlela yokuguqula phakathi kwamathebhu ku-Notepad?
Ukuguqula phakathi kwamathebhu / izikhala manje sekwakhelwe ku-Notepad ++ futhi i-plugin ye-TextFX ayisatholakali kungxoxo ye-Plugin Manager. Okokuqala setha ukusethwa kwe 'buyisela ngezikhala' kokuncamelayo - & gt; Ulimi Imenyu / Izilungiselelo Zethebhu. Okulandelayo, vula idokhumenti ofisa ukumiselela amathebhu ngalo. Gqamisa wonke umbhalo (CTRL + A).
Uwabeka kanjani amathebhu ku-Microsoft Word?
Okokuqala setha ukusethwa 'kokushintsha ngezikhala' kokuncamelayo - & gt; Ulimi Imenyu / Izilungiselelo Zethebhu. Okulandelayo, vula idokhumenti ofisa ukumiselela amathebhu ngalo. Gqamisa wonke umbhalo (CTRL + A). Bese ukhetha i-TextFX - & gt; UmbhaloFX Hlela - & gt; Izikhala eziholayo ziye kumathebhu noma amathebhu ezikhaleni.
Ngingabushintsha kanjani ubukhulu bencwajana yokubhalela?
Iya kumyalo wokuthandwayo wemenyu ngaphansi kwezilungiselelo zemenyu, bese ukhetha Amasethingi Olimi Lwemenyu / Wethebhu, kuya ngohlobo lwakho. Izinhlobo zangaphambilini zisebenzisa izilungiselelo zethebhu. Izinhlobo zakamuva zisebenzisa uLimi. Chofoza okuthi Faka okunye esikhundleni ngebhokisi lokuhlola isikhala. Setha usayizi ube ngu-4 Imibhalo ye-Notepad ++ isiphelelwe yisikhathi.